कैलाली विस्फोटमा गम्भीर घाइते १ जनाको मृत्यु, के छ अरुको अवस्था ? — Sanchar Kendra
कैलाली विस्फोटमा गम्भीर घाइते १ जनाको मृत्यु, के छ अरुको अवस्था ?
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका–४, शहीद गेटस्थित नीलम होटलमा बिहीबार भएको बम विस्फोटमा घाइते ५ मध्ये १ जनाको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा परी गम्भीर घाइते राम सिंहको धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा गएराति ११ः१५ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले पुष्टि गरेको छ । सिंहकाे कम्मर पछाडिको भागमा गम्भीर चोट लागेको थियो । घाइते भएसँगै माया मेट्रो अस्पताल पुर्‍याइएका सिंहलाई चिकित्सकले तत्काल बाहिर लैजान सिफारिस गरेका थिए । तर, थप उपचारका लागि बाहिर लैजाने प्रयास हुँदाहुँदै उनको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि सेती अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ । सिंह बझाङका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी नेकपानिकट कार्यकर्ता भएको प्रहरी भनाइ छ । यस्तै अर्का घाइते कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका ५ का लक्ष्मण सेरेलाको अवस्था पनि गम्भीर छ। उनको पनि कम्मर आसपासको क्षेत्रमा शरीरभित्र फलामका टुक्रा अड्किएका छन्। उनको, सल्यक्रिया गरेर शरिरमा रहेका फलामका टुक्रा निकालिने अस्पताल स्रोतले बताएको छ।
विष्फोटमा होटल छेउमै ग्यारेज गरी बसेका भारतको लखिमपुर जिल्लाका मोबिन खान, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का जितेन्द्र यादव र होटल मालिक केशवराज पाण्डे पनि घाइते भएका छन्। उनीहरुको अवस्था खतरामुक्त भएको अस्पतालले जनाएको छ। ग्यारेज सञ्चालक खान र जितेन्द्र यादव होटलमा चिया खान बसेका थिए। यादव पशुपंक्षी व्यवसायी संघका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष हुन्। यादवको शरीरभरि छर्रा लागेको छ भने खानको मुखमा ठुलो चोट लागेको छ।
मृतक राम सिंहले झोलामा बोकेको टीफिन बक्स विष्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शी होटल सञ्चालक पाण्डेले पनि राम सिंहको झोलामा भएको बस्तु विष्फोट भएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरीले पनि राम सिंहले बोकेका झोलामा राखेको स्टीलको टिफिन विष्फोट भएको बताए।
उनको झोलामा रहेको स्टीलको खाना बोक्ने टिफिन विष्फोट भएकाले उनलाई बढी चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले राम सिंह र उनीसँगै रहेका कञ्चनपुरको बेलडाँडीका लक्ष्मण सेरेला नेकपा कार्यकर्ता हुनसक्ने आशंका गरेको छ। यद्यपी अनुसन्धानमै भएकाले त्यसको पुष्टी भने प्रहरीले गर्न सकेको छैन।
घटनास्थलबाट प्रहरीले एक थान ९ एमएमको चाइनीज पेस्तोल पनि बरामद गरेको छ। विष्फोट भएका बेला प्रहरीलाई ग्यास सिलिन्डर विष्फोट भएको खबर गरिएको थियो, तर घटनास्थलमा हेर्दा नीलम होटलमा राखिएका तीन वटै सिलन्डर सद्धे देखिएपछि विष्फोटक पदार्थ नै विष्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। बम विष्फोटमा कञ्चनपुरको बेलौरी–५ का लक्ष्मण सेरला, मोबिन खान, जितेन्द्र यादव र धनगढी–४, बोराडाडीका केशवराज पाण्डे घाइते भएका छन् । उनीहरू सबैको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।